Wedding – ယုံကြည်ချက်နဲ့ လက်ဆက်ကြတဲ့ မင်္ဂလာပွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
Wedding – ယုံကြည်ချက်နဲ့ လက်ဆက်ကြတဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
တာရာဝေယံ၊ ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၂
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ကိုကျော်ကျော်ထွေး (ခ) ကိုမာကီးနဲ့ အမျိုးသားဒီမုိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်၊ အလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူ မစုစုနွေး (ခ) မနွယ်နွယ်ဝင်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ တော်ဝင်နှင်းဆီခြံ၊ သီရိခန်းမမှာ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီက ၇ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို အင်န်အယ်ဒီပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်နဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက မင်းကိုနုိုင်၊ ကိုဋ္ဌေးကြွယ်၊ ကိုမြအေး၊ ကိုမင်းဇေယျာ၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဗသက်အောင်တို့နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟများ စည်စည်ကားကား တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုမြအေး၊ ကိုသိန်းဆွေ၊ ကိုထွန်းမြင့်အောင်
ပြုံးချို၊ ကိုမာကီး၊ မစုစုနွေး နဲ့ မ၀ါ
မနှင်းနှေးမွှေး၊ ကိုမင်းသူ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုဇေယျာ၊ ကိုခိုင်ဝင်းအောင်၊ ကိုမြအေး
မဖြူဖြူသင်း၊ ကိုထွန်းမြင့်အောင်၊ ကိုပြုံးချို၊ မ၀ါဝါ၀င်း
5 Responses to Wedding – ယုံကြည်ချက်နဲ့ လက်ဆက်ကြတဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
Khin Lay on June 4, 2012 at 9:00 am
I am so…….happy for *ကိုမာကီးနဲ့ မစုစုနွေး တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ*. Congratulation! I am so proud of you. As well I admire both of you. May you haveapeaceful and happy life forever! Happy Wedding Day!
Nai Kyaw Sein on June 4, 2012 at 9:47 am
ဒီသတင်းကို ယခုမှသိ၇လို. ကြိုသိ၇င် လက်ဆောင်လေးပို.ပေးလို.၇တာပေါ့ဗျာ ဂုဏ်ယူပါတယ် အထူးကိုဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုကျော်ကျော်ထွေးနဲ.မစုစုနွေးတို.မင်္ဂလာ၇က်မှသည် နောင်ဘ၀အဆက်က် အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်း၇ပါစေ တိုင်းပြည်နဲ.လူထုအကျိုး ကိုဆထက်တပိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ ဗျာ နောင်ပွင့်လင်းလူ.အဖွဲ.စည်း မင်္ဂလာသတင်းများ
Mon on June 4, 2012 at 7:31 pm
CONGRATULATIONS, Burma’s hero and herione!!!!! WISH you, two HAVE A VERY HAPPY WEDDED LIFE!!!!!
zawzaw on June 4, 2012 at 8:30 pm
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့…….. အဝေးရောက် ညီတော်များ။
စောလှ on June 4, 2012 at 11:47 pm
ဟုတ်တယ်ဗျာ တကယ်ပါ နောက် ပွဲတွေကြိုသိရင် စောစောတင်ပေးပါ ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကို လူချင်းမသိပေမဲ့ တထောင့်တနေရာကနေ ပါဝင် အားပေးနေတယ်ဆိုတာ အနည်းငယ်သောလက်ဆောင်လေးတွေနဲ့ အသိပေးအားပေးချင်တဲ့ သဘောပါ မစုစုနွေးတို့အိုအောင်မင်းအောင် ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေဗျာ…… စစ်အုပ်စုတို့၏ဘေးဒုခအမျိုးမျိုးမှလဲ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ…….